छत डेलाइटिंग गुणवत्ता सामग्री: पीसी पॉली कार्बोनेट नालीदार पाना - YUYAO JIASIDA SUN PET CO।, लिमिटेड
छत डेलाइटिंग गुणवत्ता सामग्री: पीसी पॉली कार्बोनेट नालीदार पाना
समय: 2019-01-07 हिट्स:
पीसी नालीदार पाना मुख्यतया औद्योगिक बिरुवाहरूको छत भित्तामा प्रयोग गरिन्छ, सार्वजनिक खेल मैदानहरूको छत प्रकाश, साथै गोदाम, हरितगृह, स्टेशन, घाट, एयरपोर्ट, व्यावसायिक भवनहरू, इस्पात संरचना र धेरै अन्य प्रकाश क्षेत्रहरू. त्यसैले, भवनमा पीसी नालीदार पाना अनुप्रयोगको भूमिका के छ?
1. राम्रो प्राकृतिक प्रकाश प्रभाव
पीसी नालीदार पाना ठूलो गहराई संग भवनहरु को प्रकाश प्रभाव उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्दछ. साधारण सरल आन्तरिक र बाहिरी फ्ल्याट प्रकारको पीसी नालीदार पानाले दिनभर विन्डोजबाट ~ m m मीटर टाढाबाट प्रभाव बढाउन र पूरै कोठाको प्रकाश समानतामा सुधार गर्न सक्दछ।. बाहिरी प्राकृतिक प्रकाश तीव्रता कम हुँदा प्रभाव बिहानी र साँझमा विशेष गरी स्पष्ट हुन्छ, र जब गर्मी सूर्य उचाई कोण उच्च छ. साधारण भवनहरूको तुलनामा, प्रकाश बोर्डको साथ भवनहरूसँग राम्रो इनडोर प्रकाश प्रभाव र प्राकृतिक प्रकाशको उच्च उपयोग दर छ.
2. निर्माण ऊर्जा खपत कम गर्नुहोस् र इनडोर सान्त्वना बढाउनुहोस्
माथिल्लो विन्डोको पीसी नालीदार पाना प्रयोग सानो छ, गम्भीर रूपमा वातानुकूलन भार वृद्धि गर्दैन; र पीसी नालीदार पाना माथिल्लो विन्डोको माध्यमबाट हुन्छ जबकि सूर्यको भित्रपार परिचय गरिन्छ, ठूलो क्षेत्रको तल्लो विन्डोमा छायांकन बाहिर प्रभाव थियो. यो सिमुलेसन परिणामबाट देख्न सकिन्छ कि प्रकाश प्यानल को उपयोग पछि वातानुकूलन लोड मा एक उल्लेखनीय कमी छ. प्रभाव अधिक स्पष्ट हुनेछ जब अनुकूलित प्रकाश बोर्ड प्रयोग गरिन्छ.
पीसी नालीदार पाना को उच्च गुण सुविधाहरु:
1. को तापमान0डिग्री सेल्सियस र 40 ℃, 120 ℃ तापमान दायरा प्रदर्शन स्थिर छ, नरम कुनै उच्च तापमान, चिसो embrittlement घटना; डबल-लेयर संरचनामा पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ, राम्रो थर्मल इन्सुलेशन प्रभाव, विशेष गरी फार्म जाडो उत्पादनको उत्तरी चिसो क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त.
2. कुचल प्रतिरोध, सुपर प्रभाव प्रतिरोध, हिउँ र असिनाको प्रभाव रोक्न सक्छ, नेल प्वाल सुन्निनबाट बच्नुहोस्, क्र्याक र चुहावट.
3. सफा गर्न को लागी सजीलो र विशेष ध्यान बिना सफा गर्न को लागी सुविधाजनक.
4. पोलीकार्बोनेट नालीदार पाना ईस्टिग्मेटिक हो, मधुरो बत्ती, एक उच्च डिग्री कायम गर्न प्रकाश प्रसारण, पराबैंगनी किरणहरूको विशाल बहुमतलाई प्रभावकारी रूपमा ब्लक गर्न सक्दछ
5. आगो लागेमा, कोठा भित्रको धुवाँ छिटो दहन पछि डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ, जसले आगोमा हुने दुर्घटनालाई कम गर्न सक्छ र दहन प्रक्रियामा पग्लँदै गरेको पग्लिनबाट बच्न सक्छ, यसैले प्रभावी ढ .्गले साइटमा सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा.
अघिल्लो : नयाँ प्रकाश-विसरित पॉली कार्बोनेट सामग्री नरम हो र चकाचो छैन
अर्को : SABIC formable हार्ड लेपित polycarbonate पाना काँच अनुप्रयोगको लागि